I-49 yabulawa ekuhlaselweni kwee-mosque ezimbini e-Christchurch eNew Zealand: uMartin Vrijland
I-49 yabulawa ekuhlaselweni kwee-mosque ezimbini e-Christchurch eNew Zealand
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	15 Matshi 2019	• 20 Comments
Ngokutsho kweendaba, i-49 yafa enye hlaselwa kwiimikhosi ezimbini e-Christchurch, eNew Zealand. Akungabazeki ukuba le nombolo iya kutshintshwa phezulu. Leyo yonke inxalenye yeengxabano ezungeze ukusebenza kwengqondo ukwenzela abantu besabe kunye nokwesaba. Eli xesha liyi-Muslims turn by a attack. Ulwahlulo phakathi kwamaqela oluntu luye lwahlutha. Ukuba oku akusebenziyo xa kushukunyiswa yi-propaganda yamaphephandaba, ezama ukuqinisa ingxabano phakathi kwesobunxele neyokunene kuwo wonke umhlaba, ngoko kuhlaselwa okunjalo kuya kunceda.
"Kodwa uMartin Vrijland, awuyi kubanga ukuba lo hlaselo luyinyumba?"Andiyiboni ukuthetha ukuba nayiphi na into eqinisekileyo. Into endiyithembayo kukuba ukuhlaselwa okunjalo kunceda ekuhlaleni iindidi zabantu. Amaqela kunye namaqela ezombusazwe angakwesobunxele aya kukwazi ukuxhatshaza oku. Ngenkcazo, ukuhlaselwa okunjalo kufuna amanyathelo angaphezulu kwamapolisa, kwaye njengoko kuthethwa ngamazwe ngamajelo, wonke ummi uya kuphinda avuyiswe kukuba "amanyathelo amanyathelo okutshutshisa" athatyathwe. Sinokuphinda siyanelisekile ukuba ii-PC zethu zithatha i-pads kunye neefowuni zisebenzisa idatha enkulu kwaye sinokuvuya ngazo zonke iikhamera kunye namasango okuphepha afakwa kuyo yonke indawo. Siya kuvumelana nesimo samapolisa sinoyolo kwaye sinelisekile kwakhona!
Ngaphambi kokuba sihambe sisiphi na ijaji. Khawubone ukuba yintoni eyenzeka ngokusemgangathweni ukuba udlale abantu nge-hypes yeendaba kwaye uzibuze: Ngaba nathi, ngeli xesha xa kukho uluhlu olubanzi lwezinto zobuchwepheshe ezikhoyo, ube nomfanekiso omnye wento esiyiyo ukubona i-media ithola ukuzithemba?
Akukho nto esiyibonayo kwiTV kufuneka ifaneleke ngenyaniso. Ukukholelwa ukuba iindaba eziza kukuthi 'inyaniso', ngokwenene akukho nto 'inkolelo' esekelwe kwithemba. Unethemba lokuba abeendaba baya kukubonisa inyaniso kwaye babonise iindaba ezingenziwanga. Nangona kunjalo, ukuba sibheka kwizigidigidi ezizityebi ezandleni zeenkampani zogcino, sinokuthi sikrokre. Kodwa sikhetha ukukholelwa umfundisi ebandleni. Kanye njengombingeleli ophethe kakubi abantwana. Sisaqhubeka sithemba icawa. Ngaba oku kusebenza nakumajelo?
Asifuni kwaye asinakholwa ukuba banokuyidlala ngokusebenza okukhulu kwengqondo ukuze sibe nomsindo phakathi kwabantu kwiziko elifunayo. Kwizilwanyana, i-polarity isoloko ikhokelela ekukhoyo kwindlela efunwayo; njengokuba ibhetri inesibonda kunye nesigxina, apho uvelisa khona ngoku. Uluhlu oluphezulu lwe-elitist (oluneendaba kwi-pocket) luneendlela zonke ezisetyenziswayo ukuvelisa loo nto. Bayafuna "iPiggida ngokumelene no-Antifa", bashiye ngakwesokudla, amaKristu angamaMuslim, njalo njalo. Ukubeka ngale ndlela kwakha isiseko seengxabano kunye nezo ntshukumo zihlala zidala umyalelo omtsha, apho ukusetyenzana kwamandla amakhulu kuseloko kukho umphumo. (Funda ngakumbi phantsi kwevidiyo)
"Ewe, kodwa ndiyabona intliwano-ndlebe kunye nabantu bokwenene ababuhlungu ngokwenene kwaye ndiva kwiintsapho nabahlobo ukuba bayazi abantu abafikele ekuhlaselweni okunjalo". Asikwazi ukulawula konke. Ngoko ke inokuba yinyani, kodwa mhlawumbi ingaba yinkohliso. Cinga ukuba yintsebenziswano yengqondo ukulungisa ukuxhatshazwa phakathi kwabantu, ngoko unokwenza oko ngokusebenzisa iindlela zefilimu (AI, izisombululo ze-software ezihlakaniphile) okanye nje ngomntu onobangela obuthathaka. Kuyakuthi ukuba kunjalo ukuba ukuhlaselwa okunjalo kuyinyani kwaye kuyinyani. Ndikuxelela nje ukuba awukwazi ukuthembela ngokungafihlayo into evezwayo yiendaba. Ngokomlando, singatsho ukuba amajelo angabonakali ngokwenene.
Ividiyo engenhla ibonisa indlela onokuyifaka ngayo yonke imifanekiso yezithombe ngefestile eluhlaza iminyaka emashumi. Nangona kunjalo, kunye nesofthiwe yanamhlanje ungaphaya kaninzi. Ngokomzekelo, unako ukudala ubuso obungabikho ngaphandle ngokupheleleyo (bona ividiyo yokuqala ngezantsi). Emva koko unako ukunika iingxoxiswano ezibukhoma kunye nezo zinto ezizimeleyo, apho kubonakala ngathi loo mntu ukhona. Unokwenza okokugqibela kwisofthiwe ye-facial reenactment (jonga ividiyo yesibili). Ngaba unokucinga ukuba ungasebenzisa njani izixhobo zesofthiwe ze-3 eziboniswe apha ukuqhuba udliwano-ndlebe kwisitalato kubantu abangabikho? Udala umntu ongakhoyo (inkohliso enzulu), sebenzisa isikrini esiluhlaza ukubeka umntu kwimeko yolwaphulo-mthetho kwaye usebenzise isofthiwe esicacisiweyo sobuso ukuze ufake ubuso obutsha kwi-actor in-actor. Unokutshintshisa ubuso bakho kunye nelizwi ukuba uzonambitha kwaye akukho nanye unayo ingxoxo-ntetho enzulu kunye nobungqina obungabikho malunga nokuhlaselwa okukhohlisayo kwisitalato. Enyanisweni: unako ukubeka yonke into kwindawo epheleleyo. "UEwe, kodwa kukho amangqina, akunene? Ngaba kukho abantu abathi bayazi abantu? Ngokuqinisekileyo kukho onke amapolisa kunye nabasebenzi bama-ambulensi abakhona?"Ngenxa yokuba unesiprofayili sogxininiso lwezentlalo yoluntu kunye nabo bonke bazimisele ukufumana enye encinci 'yeyona njongo ephakamileyo'.
Ewe, ukuhlaselwa okunjalo kunokuthi kwenzeke ngokwenene, kodwa uxolisa ukholo lwam kumfundisi, umfundisi we-pedo kunye namajelo akhulu kakhulu kwaye ngoko ndibonisa ukusebenza kwengqondo emva kokuqhuma kweendaba. Umele ukwazi oko ukholelwayo.
(Funda inkcazelo yokulandelelana ngemifanekiso yokudubula apha)
Uludwe lwekhonkco lovimba: telegraaf.nl
Ukuhlasela kobuphekula 24 Oktoberplein e-Utrecht, ukwethusa lonke ilizwe!
Ukuhlaselwa Kulungile kwiholide yesizwe "Le Quatorze Juillet" ukubhiyozela iNguqulelo yesiFrentshi
I-CIA kaCharlie Hebdo kufuneka inyuse ukwanda kwe "Muslim terror" ngekhathuni entsha
Ukuprofetwa kwesigebengu sikaBill Cooper kunye neNkosana kwaphuma
tags: hlaselwa, christchurch, mi mosque, mi mosque, mikhosi, ENew Zealand, loyiko, ukuhlasela koogorha, ulwabilo, ezimbini
15 Matshi 2019 kwi-13: 57
Ndabona le vidiyo ivela ... ayiyazi ukuba ngubani umthombo, kodwa nje kuphela irekhodi
16 Matshi 2019 kwi-02: 48
15 Matshi 2019 kwi-14: 04
"Igazi laye litshiza phezu kwam ..." watsho loo ndoda ene-blouse ecocekileyo kunye nobuso obucocekileyo
16 Matshi 2019 kwi-03: 07
Ingxaki, Ukuphendula, Isombululo nabani na?
15 Matshi 2019 kwi-15: 14
Ukuba andiyiphutha, i-Christchurch yayiseendaba kwiiminyaka embalwa edlulileyo. Andiyazi ukuba kutheni. Ngaba kukho uxhulumaniso? Mhlawumbi unethuba lokujonga oku.
15 Matshi 2019 kwi-15: 38
Kwakukho inyikima kwixesha kwaye izakhiwo zawa ...
15 Matshi 2019 kwi-15: 41
15 Matshi 2019 kwi-15: 51
Iphazamisa kakuhle kwinto eyenzekayo kanye kunye nabezindaba ezilawulwayo zigxininise ...
Baxakekile ukuphumeza izicwangciso zeAlbert Pike.
15 Matshi 2019 kwi-17: 04
I-Idd + unayo i-Ides yakho ka-Matshi umhla wokuthakazelisa olandelayo ngu-22-3
15 Matshi 2019 kwi-17: 53
15 Matshi 2019 kwi-16: 52
Ndiyaqonda ukuba abaninzi abenzi bokubi babanjwe njengabangabamangalisa. Ndiyamangalisa ukuba kukho ityala lolwaphulo-mthetho oluza kubonisa imvelaphi kunye neenjongo. Akunakwenzeka ukuba omnye okanye abaninzi bakrokratshi baqhutywa yiinkonzo zokhuseleko okanye bezingenayo. Uvame ukubona ukuba umntu onjalo ukhutshwa ngokukhawuleza kwaye awusayikuva kuloo mntu.
Asiyi kufumanisa ukuba siyakwazi ukufumana ukuba ngaba 'amagqwetha' kunye nabagwebi baseNew Zealand njengama-yomiland, eNetherlands.
15 Matshi 2019 kwi-19: 03
Usebenziso lobuxoki lweflegi ngomyalelo we-SIS?
"Ayikho iqela elawule ukuhlaselwa kwam, ndenza isigqibo ngokwam. Nangona ndidibana neNew Knights Templar ngeentsikelelo ekuxhaseni ukuhlaselwa, okwenziwe. "
aurora0026 wabhala wathi:
15 Matshi 2019 kwi-21: 06
Andiyiva nantoni na malunga ne-Boeing 737 Max kwakhona, ingaba njani loo nto? Kubonakala ngathi umntu ufuna ukukhusela i-Boeing kunye nabanini-nxaxheba bayo.
15 Matshi 2019 kwi-21: 54
Namhlanje kulula kakhulu ukutshisa iintlanga zonke. Babeqhele ukwenza okufanayo, ngoku ngokukhawuleza.
E-Urk ubona ibali elifanayo, ulutsha olungamaKristu olubekwa kwicala elide kunye nayo yonke imiphumo echaphazelayo. Uhlaselo lwe-NZ lubangela iimvakalelo ezingakumbi. Abantu abaqaphele ukuba sidlala badlala ebhokisini elifanayo kumaphephandaba njengalowo menzi wobubi.
Akukho mntu uyazibuza ukuba awunayo imikhosi eAustralia ukudubula amaSilamli, akukho nkonzo kaKristu. Ngenxa yokuba kuhlaselwa nguKristuchurch kumaMuslim. Nje ngokuba u-Urk onobungane uhlasela iMoroccans. Ufumana njani izixhobo ezininzi kwi-trunk yakho kwilizwe apho zonke izixhobo zibhaliswe?
Igama lomgcini wekhompiyutha ### Elfie ### el- nangona (i-frequency ephantsi kakhulu) icilongo = trump = icilongo iya kuba yinto ehambelanayo.
Ukuba ndifunda zonke iimpendulo ke ezininzi zikhokelwa yi-fairies ###
16 Matshi 2019 kwi-06: 51
Uphi inkwenkwe yokuzalwa ye-28 inokufumana imali yokuqala kwiYurophu kwaye ihambele amazwe ahlukeneyo apho ukuze unike uluvo lwakhe kunye nenzondo. Ngaba ke le ndoda ingakwazi ukufumana ubomi kwiinyanga ezimbalwa eDunedin, ibe ilungu lebhula lokudubula kwaye emva koko liqeshe iimoto ukwenza isenzo sakhe? Umntu onjalo unokufumana njani ikhadi lekhredithi.
Into edibanisa kakhulu yithuba eliphakathi kokutshuntshwa kwembini. Ndivile imizuzu ye-11 kunye nemizuzu ye-7. Umgama malunga ne-6 km, kodwa ufunda ukusuka kwi-mosque yokuqala kwimoto kwaye umgama, ukupaka imoto kunye nomsikiti ozayo ke ngoku ixesha elide lanele. Ngenxa yokuba ndihlala apha ngokwam, ndifuna ukuthatha indlela namhlanje. Ngelishwa, ezininzi iindlela eziseMosque zokuqala ukudubula zavalwa ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, ngeveki ndifuna ukuzama kwakhona ukuba ngaba i-6 km ingafakwa kwii-7 imizuzu (ngoLwesihlanu ntambama).
16 Matshi 2019 kwi-07: 30
Inomdla! Sigcine saziswa ..
16 Matshi 2019 kwi-08: 36
Yintoni eyimangalisa kukuba kule vidiyo enekhamera yakhe entloko, ikhupha wonke umntu kwaye ibuye iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iqinisekise ukuba ifile. Kweminye imikhosi kukho ininzi eyalimalayo, ininzi yabo i-filming kwaye ihleli kwiifowuni zazo. Kubonakala kum ukuba awunamkeli ifowuni yakho kwimeko enjalo. Uya kunceda abazalwana bakho, kunjalo?
mb. wabhala wathi:
16 Matshi 2019 kwi-14: 19
Mhlawumbi unokujongana nokukhawuleza kweendaba ukuba abe ngowokuqala ukubika amatyala. Kodwa ukuba yinyaniso, malunga nokuphila kwabantu (abaneentsapho, njl).
imvelaphi yeendaba (ezinye iindaba, i-PM, njl.) Unokulindela ukuba amapolisa anikezele ngolwazi malunga nabani na maxhoba kunye nabanye.
- inani lamaxhoba litshintshile kwiimeko ezibucayi. Okufa ngakumbi kunokulimala ngendlela.
- ifoto kunye nesihlangu
- "Abasemagunyeni abazange baqinisekise ngokusemthethweni ukuba ngubani, kuba kufuneka avele enkundleni ngoMgqibelo kwaye usesikrokre ngokusemthethweni."
- 'U-Brenton Tarrant oneminyaka eyi-28 uboshwe waza wahlawuliswa ngokubulala (i0700 ngeyure ngoMgqibelo weNZ ngexesha)
- "Kwakhona kwafunyanwa iindlovu eziqhotyoshelwe enye okanye izithuthi ezininzi." (?)
- "UNdunankulu uJacinda Ardern uqinisekisile ngaphambili kwingqungquthela yenkomfa ukuba umqhubi weempembelelo" (mhlawumbi ngaphambi kwexesha)
- Kumele ukuba yinto enkulu yegazi ... ayibonakali ngokucacileyo
- "UNdunankulu waseNew Zealand, uJacinda Adern, wasabela ngokukrakra. Wathetha ngo "suku olumnyama" kwaye wayengathandabuzeki: oku kukuhlaselwa kwamaphekula. " (ngaphambi kwe-PM)
- "Ngokombutho waseSiriya, ubuncinane i-1 yaseSiriya yafa." (umthombo ohlukeneyo)
- "Kuya kubakho nabantwana abaningana phakathi kwamaxhoba. Ngokweengxelo zokuqala, oku kubaluleke kakhulu ngabantwana baseSiriya. '(ukucinga, akunjalo?)
- 'Abantwana bakhe baqalise umkhankaso wokuqokelela imali ukuze bangcwabe uyise e-Afghanistan. '(kungekudala)
- "Ngokutsho kwendawo yeendaba evela eBangladesh naseBDNews24.com, naye wabulawa ngexesha lokuhlaselwa koogqirha. "(umthombo ohlukeneyo)
- "Ngokombutho wezindaba zase-Saudi Al Arabiya, uMohsen al Muzaini wanqabana nokulimala kwakhe. "(umthombo ohlukeneyo)
- "Omnye unyana ka-Khaled usasafuni." (kungekhona kwi-mosque, okanye inani labantu abangachongiweyo okwamanje?)
16 Matshi 2019 kwi-14: 31
... kwaye ngokuqinisekileyo akhathazeki ngabo bonke abantu abafa ngenxa yezifo ezithintekayo kunye nendlala. Azikho ezinye iindaba ...
Iberi wabhala wathi:
16 Matshi 2019 kwi-16: 06
Into endiyiqondayo kukuba umenzi wobubi uyilungu leTrans Templar (i-Freemasonry) kwaye wayenokuthi amalungu ambalwa entlangano ayenayo ayindala yaseSerbia (i-paramilitary). Ngokomntu, ndicinga ukuba umzabalazo weKosovo (ngokubhekiselele kwintsebenziswano yezopolitiko kutshanje) ingahlaselwa kwiinyanga ezizayo.
« Ifowuni ephuthumayo!
Imifanekiso yevidiyo yebhalothi yeBrenton Tarrant (ukusasaza bukhoma) I-Christchurch eNew Zealand »
IZIVIYO NGUJULY 2017
Iindwendwe ezipheleleyo: 14.424.550
Yazi imbali ukuqonda i-ajenda ye-UN 2030
Itekhnoloji ye-Smart kunye nolawulo lwetekhnoloji yehlabathi iya kuyisindisa imozulu
URutger Bregman ubiza ulawulo lwe-UN lobuzwilakhe
Ukuphakanyiswa okukhulu kweSinterklaas: ukumangalisa okuhle kufakwe kakuhle!
Iikhamera ezi-Smart kumabala ebhola ekhatywayo yandulela inkqubo yenkqubo yamaTshayina?
Ikhamera 2 op Yazi imbali ukuqonda i-ajenda ye-UN 2030
UMartin Vrijland op Ukuphakanyiswa okukhulu kweSinterklaas: ukumangalisa okuhle kufakwe kakuhle!
UMartin Vrijland op Yazi imbali ukuqonda i-ajenda ye-UN 2030
UMartin Vrijland op Isimo samapolisa sibi ngakumbi kunaseJamani yamaNazi esidlula njengengcuka enxibe impahla yegusha kwaye awuyiboni